महिला हस्तमैथुन : मिथक र सत्य - सहकार्य मिडिया सहकार्य मिडिया मनोरञ्जन
३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१ Amit Neupane	0 Comments
मेरो नाम हना हो र म हस्तमैथुन गर्छु । तपाईं गर्नुहुन्छ ? धेरै होइन । यद्यपि महिला हस्तमैथुनका सम्बन्धमा उति धेरै चर्चा हुँदैन । के उनीहरु खुलेर कुरा गर्छन् ?
म २५ वर्षकी भएँ । मलाई याद छ कि पुरुषहरु विद्यालयमा हस्तमैथुनबारे खुलेर कुरा गर्थे । तर, केटीहरु ? स्पष्ट छ उनीहरुलाई यसको लागि स्वतन्त्रता छैन । यदि कुनै केटाले हामी सबैजसो केटीहरुलाई हस्तमैथुनको बारेमा सोधे भने हाम्रो जवाफ हुन्छ, ‘गरेको छैन, यो अश्लील हो ।’ हामी हस्तमैथुन गर्नेले पनि जवाफ यस्तै दिने गर्छौं ।
१५ वर्षको उमेरमा मलाई मेरी आमाले हस्तमैथुनको बारेमा बताएकी थिइन् । साथै हस्तमैथुन गर्नु सामान्य र स्वाभाविक हो भन्ने बुझाएकी थिइन् । साथसाथै हस्तमैथुन गरेपछि आफुलाई कसरी सबैभन्दा राम्रो तरिकाले यौन सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ । विवाहपछि यौनसुख प्राप्त गर्नका लागि विवाह अघि हस्तमैथुन गर्नु उचित हुने कुरा गरेकी थिइन् ।
यतिबेला मेरो जवाफ थियो, ‘आमा मसँग यस्तो कुरा नगर्नुहोला ।’ तर, कम्तीमा उनले प्रयास गरे र मलाई अहिले राम्रो लग्यो ।
हामी कहिले काहीँ यस्तो यौन सुख लिन रुचाउँछौं, जहाँ हामी नितान्त एक्लो हुन्छौं । त्यहाँ कोही नहोस् । यति लामो समयपछि म आफ्नो देहसँग एकदमै सहज छु । म आफैले आफैबाट यौनसुख प्राप्त गर्न सक्छु । म आफ्नो पार्टनरबाट के चाहन्छु ? यस सम्बन्धमा पनि मसँग आत्मविश्वास छ । हरेकको कामुक अलग अलग तरिकाको हुन्छ ।
हस्तमैथुनले केही ओखतीको काम पनि गर्छ । यसबाट तपाईंले गहिरो निद्रा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । साथै तनावबाट मुक्त पनि रहन सक्नुहुन्छ । अरु औषधिबाट यस्तो कुरा सहजै प्राप्त हुँदैन, जुन हस्तमैथुनबाट हुन्छ । यसका लागि यौन उत्तेजनालाई बुझ्ने कक्षा हुनुपर्छ । हस्तमैथुनले तपाईं र तपाईंको यौनजीवनलाई अरु सशक्त बनाउँछ ।
← राष्ट्रपतिको ’भद्दा व्यवहार’
उपेन्द्र यादव समूह सरकारमा सहभागी हुने निर्णय, १९ सांसद उपस्थीत भए बैठकमा →
काभ्रेको स्थापित सहकारी श्री मनकामना साकोसको सेवा केन्द्र अब पाँचखालमा पनि ३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१
जिल्ला सहकारी संघ, काभ्रेले श्रावण २९ मा अभियानमुखी कार्यक्रम गर्दै ३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१
सरकारले सोध्यो रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण* ३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन ३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन ३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१
२४ घण्टामा देशभर ३३८३ संक्रमित थपिए, २४ को मृत्यु ३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१
उपत्यकामा फेरि साउन २७ सम्म निषेधाज्ञा लम्बियो, के गर्न पाइन्छ के पाइँदैन ? (आदेशसहित) ३ श्रावण २०७८, आईतवार ००:४१